Paikady SNDER*: “Ambanivolo ho matihanina sy mirindra” | NewsMada
Paikady SNDER*: “Ambanivolo ho matihanina sy mirindra”
Miara-miasa akaiky ny minisiteran’ny Indostria, ny varotra sy ny asa tanana (Mica), sy ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana, ary ny jono (Maep) ho fampandrosoana ny fandraharahana any ambanivohitra (SNDER). Maro ny faritra nanaovana fanadihadiana ka novolavolaina ny fehinkevitra na paikady manodina ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana mifanaraka amin’ny tetikasa Prosperer sy ny Fida, natolotra ny Mica, omaly.
Paikady fototra dimy sy fepetra 60 ny nofaritana, ary nozahana avokoa ireo sakana rehetra sy ny mifandray aminy. Voalohany ny fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana any ambanivohitra, anisan’ny nofaritana ny sakana amin’ny fampidirana tsy ara-dalàna ireo vokatra avy any ivelany; ny ady amin’ny fihariana tsy ara-dalàna; hamoraina ny fananganana orinasa madinika…
Hita ao amin’ny paikady faharoa ny fampivoarana ny fiaraha-miombona antoka, ny fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny tsy miankina. Fahatelo, ary tena manahirana ny maro, momba ny famatsiam-bola. Ankoatra izay ny fanatsarana ny fitantanana sy ny fiaraha-miasan’ny minisitera maromaro. Tanjona ny “Fandraharahana any ambanivolo ho matihanina sy mirindra”.
Ampahany amin’ireo fepetra nofaritana ireo, iarahan’ny Mica sy ny Maep miasa. Tsy afa-miala amin’izany koa ny minisiteran’ny Angovo, ny famatsiana herinaratra; ny Asa vaventy, fanamboaran-dalana; ny Fiarovana, fiantohana ny fandriampahalemana. Mbola hampandalovina eny amin’ny Antenimierampirenena ny fehinkevitra, ary andrasana ny fampiharana izay voasoratra.
SNDER* : Stratégie nationale du développement de l’entrepreneuriat rural